तुलसीको बोट घरमा राख्नाले शुभ फल प्राप्त हुनेछ सुख-शान्ति र धन लाभ ! – Khabar Patrika Np
तुलसीको बोट घरमा राख्नाले शुभ फल प्राप्त हुनेछ सुख-शान्ति र धन लाभ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: २२:३०:२२
१. वास्तुशास्त्र अनुसार तुलसीको पात एकादशी, आइतबार र मंगलवारको दिन टिप्न हुदैन ।२. वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्व-उत्तर दिशा धनको देवता कुबेरको दिशा मानिन्छ । त्यसैले घरको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनका तुलसीलाई उत्तर-पूर्व दिशामा राख्नु पर्दछ ।३. यदि तपाईको घरमा वास्तुशास्त्र सम्बन्धि केही दोष छ अर्थात सधै कुनै न कुनै समस्या आईरहन्छ भने दक्षिण-पूर्व दिशामा तुलसीको बोट रोप्नुहोस् ।४. यदि तुलसीको बिरुवा सुक्यो भने नजिकैको खोला या कुवामा लगेर राख्दिनु पर्छ । यदि सक्नु हुन्न भने तुलसीको गमलालाई माटो मै गाड्नु पर्छ ।